द्रुत नतीजाहरूको लागि उत्तम खाँसी औषधि - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, चेकआउट मनोरञ्जन घरपालुवा जनावर भारी खेल औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी प्रेस स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु कम्पनी, समाचार चेकआउट समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> औषधि जानकारी >> सबै भन्दा राम्रो खोकी औषधि
सबै भन्दा राम्रो खोकी औषधि
यो एउटा हो सबै भन्दा सामान्य कारणहरू व्यक्तिहरू उनीहरूको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक देख्छन्। धेरै जसो खोकी सामान्य चिसो वा वातावरणीय कारकका कारण हुने भएकोले, ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) खोकी औषधि र घर-घर उपचारहरूले सामान्यतया समस्या समाधान गर्दछ। यद्यपि तपाईको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकलाई भेट्न आवश्यक छ चिकित्सा सल्लाह लिन र औषधी लिने औषधी लिन पनि - यदि खोकीले ज्वरो ल्यायो वा तीन हप्ता भन्दा लामो समय सम्म रह्यो भने।
कहिले काहिं कहिले काँही कफ सामान्य हो, चिसो नभएको खोकी अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्थाको चिन्ह हुन सक्छ। खोकी एक रक्षात्मक पलटाव हो जुन अत्यधिक स्राव र एयरवेबाट विदेशी निकायहरू खाली गर्नु हो। यद्यपि गम्भीर र बारम्बार खोकीले तपाईंको जीवनको गुणस्तरमा ठूलो असर पुर्‍याउन सक्छ।
यी खोकीको मुख्य कारणहरू हुन्:
एक प्राथमिक हेरचाह यात्रा कति छ
सामान्य चिसो: सामान्य चिसो नाक र घाँटी (माथिल्लो श्वसन पथ) को भाइरल संक्रमण हो। यो सामान्यतया हानिरहित हो, यद्यपि यो त्यस्तो लाग्दैन। अधिकांश व्यक्ति सात देखि १० दिनमा एउटा साधारण चिसोबाट निको हुन्छन्।
भाइरल माथिल्लो श्वास नलिका संक्रमण: यो सामान्य चिसो को लागी अर्को नाम हो। प्रायः यस्तो हुन्छ जब भाइरस मुख वा नाक मार्फत शरीरमा प्रवेश गर्दछ। लक्षणहरू दिइएमा, यो प्राय: जसो स्पर्श, छींकने, वा खोकी द्वारा संक्रमित हुन्छ।
फ्लू: इन्फ्लुएन्जा एक भाइरल संक्रमण हो जुन तपाईंको श्वसन प्रणालीमा हमला गर्दछ। इन्फ्लुएन्जालाई सामान्यतया फ्लू भनिन्छ, तर यो पेट फ्लु भाइरस जस्तो होइन जुन पखाला र बान्ता गर्दछ। यद्यपि वार्षिक इन्फ्लूएन्जा भ्याक्सिन १००% प्रभावकारी छैन, तैपनि यो फ्लूको बिरूद्ध तपाईंको सब भन्दा राम्रो रक्षा हो।
ब्रोंकाइटिस: ब्रोन्काइटिस भनेको तपाईको ब्रोन्कियल ट्युब्सको अस्तरको एक जलन हो, जुन तपाईको शरीरले हवाँमा र तपाईंको फोक्सोमा हावा बोक्न प्रयोग गर्ने मुख्य परिच्छेदहरू हुन्। ब्रोन्काइटिस भएका व्यक्तिहरूले अक्सर बाक्लो बलगम खोक्रा निकाल्छन्, जसलाई पनि डिस्कोल गर्न सकिन्छ। ब्रोन्काइटिस हुन सक्छ तीव्र वा पुरानो। यो सामान्यतया भाइरसको कारणले हुन्छ - प्रायः उही भाइरसहरू जसले सामान्य चिसो वा फ्लू निम्त्याउँदछ - तर केहि चुनिंदा केसहरूमा यो ब्याक्टेरियाको कारणले हुन सक्छ।
खोकीको औषधिको प्रकार
खोकी र चिसोका लक्षणहरूको उपचार गर्न विभिन्न औषधीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर तीमध्ये थोरैले मात्र द्रुत लक्षणहरूको उपचार गर्न सक्दछन्। यहाँ मुख्य प्रकारहरू छन्:
खोकी दमन (पनि भनिन्छ antitussives ) खोकी रिफ्लेक्स अवरुद्ध, सम्भावना खोकी बनाउने। डेक्सट्रोमर्थोर्फन (डीएम) खान्की सप्रेसन्टहरूमा सबैभन्दा सामान्य सक्रिय संघटक हो। खांसी धूम्रपान, एम्फाइसेमा, दम, न्यूमोनिया, वा जीर्ण ब्रोन्काइटिसको कारणले भएको हो भने खांसी दबाउने उपकरण प्रयोग गर्नु हुँदैन। एन्टीहिस्टामाइन्स वा डिकन्जेन्ट्सले घाँटीलाई सुक्खा बनाउन सक्छ, बलगमलाई गाढा र सजिलो बनाउनको लागि, अझ गम्भीर खोकीको परिणामस्वरूप।
Expectoants छातीमा बलगम खुकुलो पार्नुहोस् वा पातलो गर्नुहोस्, यसलाई खोकीमा सजिलो बनाउँदछ। एउटा लोकप्रिय उदाहरण गुइफेनेसिन हो। अतिरिक्त तरल पदार्थ पिए पनि मद्दत गर्न सक्छ।
संयोजन औषधि एक्सपेक्टोरन्ट्स, खोकी दबाउने, र अन्य सक्रिय तत्त्वहरूको संयोजन समावेश गर्दछ। तिनीहरूसँग एन्टिहिस्टामाइन्स, पेन्किलर, र डिकन्जेन्ट्स एकै पटकमा धेरै लक्षणहरूको उपचार गर्न सकिन्छ। सामान्य चिसोबाट खोकीको उपचार गर्न, राम्रो छनौट एक चिसो औषधी हो जसले एन्टीहिस्टामाइन र एक डिकन्जेस्टन्ट दुबै समावेश गर्दछ, किनकि यसको आफ्नैमा एन्टिहिस्टामाइन अप्रभावी हुन सक्छ।
काउन्टर ओभर-द-काउन्टर खाँसी औषधी के हो?
सामान्य चिसोको प्राय जसो केसहरू स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमा बिना नै उपचार गर्न सकिन्छ, त्यहाँ धेरै औषधीहरू छन् जुन तपाईको स्थानीय औषधि पसलमा कुनै पर्चे बिना नै औषधी पसलमा लिन सकिन्छ। केहि अधिक लोकप्रिय OTC, खोकीको लागि द्रुत उपचार समावेश:
कसरी zoloft तपाइँ महसुस गर्न को लागी मानिन्छ
स्यूडोफेड्रिन: ओटीसी औषधि जसले नाकको भीडलाई हटाउँदछ। सबै भन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड Sudafed हो(Sudafed coupons | Sudafed के हो?)। किनकि यसले रक्तचाप बढाउन सक्छ, सुदाफेडलाई उच्च रक्तचाप वा अन्य मुटु सम्बन्धी समस्या भएकाहरूको अनुगमन गरिनु पर्छ। साइड इफेक्टमा चिड़चिड़ापन, चिन्ता, र hyperactivity शामेल छ। नोट: त्यहाँ केही राज्यहरू छन् जुन यसका लागि पर्ची आवश्यक पर्दछ र प्रत्येक राज्यले यसलाई फार्मेसी काउन्टरको पछाडि राख्छ। तपाईंले खरीद गर्न आईडी देखाउनु पर्छ।
ग्वाइफेसिन: प्राय: यसको ब्रान्ड नाम Mucinex द्वारा चिनिन्छ(Mucinex कूपन | Mucinex के हो?), guaifenesin केवल OTC एक्सपेक्टोरेंट उपलब्ध छ जाडोबाट लक्षणहरू राहत गर्न। यसले छातीको भीडलाई कम गर्ने काम गर्दछ र प्राय: pseudoephedrine सँग मिल्दछ धेरै लक्षणहरू कम गर्न। ग्वाइफेसिनले पातलो बलगमलाई सहयोग पुर्‍याउँछ, यसले बलगम वा कफलाई कफ बनाउन सजिलो बनाउँदछ, यद्यपि रिपोर्टहरू फरक फरक भए पनि यो कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्छ। संक्रमणको कारण खोकीसँग बिरामी हुँदा धेरै तरल पदार्थहरू पिउनु त्यत्तिकै उपयोगी हुन सक्छ।
Dextromethorphan : खोकी दमन गर्ने कि दिमागमा संकेतहरु लाई असर गर्छ कि कफ रिफ्लेक्स ट्रिगर। डेक्सट्रोमर्थोर्फेन खोकीको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ र सिरप, क्याप्सुल, स्प्रे, ट्याब्लेट, र लोन्ज फारममा काउन्टरमा उपलब्ध छन्। यो धेरै ओभर-द-काउन्टर र प्रिस्क्रिप्शन संयोजन औषधिहरूमा पनि छ। सब भन्दा साधारण ब्रान्ड नाममा रोबाफेन कफ (रोबिटसिन) र विक्स डेक्विल खाँसी सामिल छन्। चार वर्ष मुनिका बच्चाहरुका लागि सिफारिस गरिदैन। एक वयस्क खुराक फार्मूल तत्काल- या विस्तारित रिलीज छ कि छैन मा निर्भर गर्दछ। अधिकतम खुराक २ hours घण्टामा १२० मिलि हो।
दुखाइ हटाउनेहरू: टायलनॉल (एसिटामिनोफेन)(Tylenol coupons | Tylenol के हो?)र एडभिल (आइबुप्रोफेन)(सल्लाह कुपन | सल्लाह के हो?)दुबैले चिसो र फ्लू लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जस्तै ज्वरो र शरीरको दर्द कम गर्ने।
सम्बन्धित : Sudafed vs Mucinex
यदि तपाईंलाई ओटीसी खोकी औषधिहरूले तपाईंको लागि काम गरिरहेको पाउँदैनौं, र तपाईंको लक्षणहरू बिग्रेको छ वा निरन्तर रहन्छ भने, तपाईंको डाक्टरले मद्दतको लागि औषधी दिन सक्छ। खोक्राको सबैभन्दा सामान्य कारणहरू माथिल्लो श्वास रोगहरू हुन् भनेर विचार गर्दै, र यी सामान्यतया भाइरसको कारणले हुन्छन्, यो सम्भव छैन कि तपाईंको जीपीले कुनै पनि एन्टिबायोटिकलाई खोकी उपचारको रूपमा तोक्नेछ। एन्टिबायोटिक्स केवल ब्याक्टेरिया संक्रमणको लागि प्रयोग गरिन्छ, जस्तै स्ट्र्याप घाँटी।
यदि तपाईंलाई खोकी छ जुन तपाईं केवल हल्लाउन सक्नुहुन्न र यो तीन हप्ता भन्दा बढिमा रहन्छ भने, आफ्नो डाक्टरलाई भेट्नुहोस् र अन्तर्निहित अवस्थाको सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् जुन पर्चेको औषधीको साथमा उपचार गर्न आवश्यक पर्दछ।
सबैभन्दा राम्रो औषधी खाँसी औषधी के हो?
जे होस्, यहाँ बजारमा धेरै औषधी खाँसी औषधीहरू छन् यहाँ केहि तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले छिटो खोकी र दुखाई राहतको लागि सल्लाह दिन सक्छन्:
म कसरी जान्दछु कि योजना बी काम गरिरहेको छ
उत्तम नुस्खा खोकी औषधि
औषधि नाम गर्भवती महिलाहरूको लागि सिफारिश गरिएको हो? बच्चाहरूको लागि स्वीकृत? यो कसरी काम गर्दछ
Codeine होईन, बच्चा ओपिओइडमा निर्भर हुन सक्छ, र औषधी आमाको दूधको माध्यमबाट पार गर्न सकिन्छ। होइन। २०१ of सम्ममा, कोडिन प्रति १ 18 भन्दा कमका बच्चाहरूमा contraindated छ एफडीए । ओपिओइड खोकी दमन।
टेस्लोन पर्ल (बेन्जोनेट) एन / ए – एफडीए गर्भावस्था कोटि सी (अज्ञात यदि यसले भ्रुणलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ वा यसले स्तनको दूषित पदार्थ दूषित गर्दछ भने)। होईन, १० बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरुलाई चिकित्सा निर्देशन बिना नदिनुहोस्। यो बच्चाहरूको लागि घातक हुन सक्छ। यो फोक्सो र घाँटी को क्षेत्रहरु सुन्न, फलस्वरूप खोकी रिफ्लेक्स घटाउँछ।
Tussionex PennKinetic (hydrocodone-chlorpheniramine) एन / ए – एफडीए गर्भावस्था कोटि सी (अज्ञात यदि यसले भ्रुणलाई हानि पुर्याउँछ वा यदि यो स्तनको दूधमा जान्छ भने)। शिशुहरू औषधीमा निर्भर हुन सक्छन्। तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्नुहोस्। सं १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्दैन। हाइड्रोकोडोन एक खोकी दमन हो जसले मस्तिष्कमा कफ रिफ्लेक्स स reduces्केत घटाउँछ। क्लोरफेनिरामाइन एन्टीहिस्टामाइन हो जसले शरीरमा हिस्टामाइन्सको प्रभाव घटाउँछ।
प्रोमेथेगन (promethazine) एन / ए – एफडीए गर्भावस्था कोटि सी (अज्ञात भने यदि भ्रुणमा हानि पुग्न सक्छ वा यसले स्तनको दूधे दूषित गर्दछ भने)। हो यो २ बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुमा सावधानीका साथ गर्न सकिन्छ। खोकी दमन र antihistamine।
हाइड्रोमेट (hydrocodone-homatropine) अहँ, बच्चा ओपिओइडमा निर्भर हुन सक्छ, र औषधी स्तनको दुध मार्फत प्रसारित गर्न सकिन्छ। सं १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्दैन। ओपिओइड खोकी दमन र एन्टीहिस्टामाइन।
Codeine साथ Phenergan (promethazine-codeine) अहँ, बच्चा ओपिओइडमा निर्भर हुन सक्छ, र औषधी स्तनको दुध मार्फत प्रसारित गर्न सकिन्छ। सं १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्दैन। ओपिओइड खोकी दमन र एन्टीहिस्टामाइन।
हाइड्रोकोडोन-एसिटामिनोफेन अहँ, बच्चा ओपिओइडमा निर्भर हुन सक्छ, र औषधी स्तनको दुध मार्फत प्रसारित गर्न सकिन्छ। हो यो २ बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुमा सावधानीका साथ गर्न सकिन्छ। ओपिओइड खोकी दबाउने र दुखाइ राहत
हामी तपाईंलाई कडा सिफारिश गर्दछौं कि गर्भवती वा स्तनपान गर्दा कुनै पनि औषधि लिनु अघि वा कुनै औषधि दिनु अघि तपाईं आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् १२ बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू ।
खोकीको औषधि कसरी लिने
चिसो औषधि बिभिन्न प्रकारमा उपलब्ध छ, सिरप, पाउडर, गोली, क्याप्सुल, र नाक स्प्रे सहित। प्रायः तपाईका लागि सब भन्दा उत्तमको फार्म केवल व्यक्तिगत प्राथमिकता हो। उदाहरण को लागी, धेरै बच्चाहरु ट्याबलेटहरु निगल्न संघर्ष गर्दछ, विशेष गरी जब उनीहरुमा घाँटी दुखाइन्छ, त्यसैले सिरप नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ।
खोकी सिरप: वयस्कहरू र गोली भन्दा छिटो राहत चाहने बच्चाहरूका लागि राम्रो हो, जो अत्यन्त घाँटी दुखेको दु: ख पाइरहेकाहरूका लागि, र बच्चालाई जसले निलहरू निल्न समस्या गर्दछ।
पाउडर: सिरपमा समान। यसले औषधीको छिटो काम गर्दछ र बच्चाहरूलाई मौखिक रूपमा लिन सजिलो हुन्छ।
गोलीहरु: दिनभरि निरन्तर राहत चाहिने वयस्कहरूको लागि राम्रो
नाक स्प्रे: वयस्कहरू वा गलेमा गलेका बच्चाहरूका लागि जसले तिनीहरूलाई ईन्जस्टिंग गोली वा अन्य मौखिक फारमहरू सजीलै रोक्दछ।
खोकी खोकी दमन संग मद्दत गर्दछ। धेरै खोकीका ड्रपहरूले घाँटी दुख्ने समस्यालाई कम गर्दछ मेन्थोल वा महजस्ता थपिएका सामग्रीहरूको साथ।
खोकीको लागि उत्तम घरेलु उपचारहरू के के हुन्?
जबकि तपाईको खोकीलाई सजिलो पार्न धेरै औषधीहरू उपलब्ध छन्, त्यहाँ तपाईले घरमा पनि गर्न सक्ने धेरै चीजहरू छन् जुन औषधी आवश्यक पर्दैन र धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ। खोकी उपचार समावेश:
तरल पदार्थ: तरल पदार्थले तपाईंको घाँटीको बलगम पातलो पार्न सहयोग गर्दछ। न्यानो तरल पदार्थहरू जस्तै ब्रोथ, चिया वा जुसले तपाईंको घाँटी दुख्न सक्छ।
खोकी तिनीहरूले सुक्खा खोकीलाई सजिलो बनाउँदछ र चिडिएको घाँटी दुख्छ। त्यहाँ धेरै प्राकृतिक प्रजातिहरू छन्, मेन्थोल, निम्बू, जिंक, भिटामिन सी, र महको साथ।
मह: एक चिया चम्चा महले खोकीलाई सुस्त पार्न सक्छ। थप सुखदायक प्रभावका लागि यसलाई नुनको साथ केही न्यानो पानीमा थप्नुहोस्।
भापोरिजर्स वा ह्युमिडिफायरहरू: हावामा चिस्यान थपेमा सास फेर्न सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्नको लागि तपाईंसँग एक जोडी विकल्पहरू छन्। बिहान, तपाईं आफ्नो बाथरूमको ढोका बन्द गरेर र शीरमा तातो पानी चलाउँदै मिरर कुहिन नभएसम्म आफ्नै भाप कोठा सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। बाफले तपाइँको नाक र छाती अनलक गर्न मद्दत गर्दछ। साँझमा, तपाई खोईमा बाधा नभएको रातबाट बच्नको लागि तपाईको सुत्ने कोठामा बाष्पीकरण वा ह्युमिडिफायर चलाउन सक्नुहुन्छ।
गैर-औषधीय सालिन ड्रपहरू: गैर-औषधीय सालिन ड्रपको साथ तपाईंको नाकको भित्र छिचोल्ने पदार्थले बलगम खाली गर्दछ र भरिएको नाकबाट राहत पाउन सक्छ। यसले नासिका ड्रिपलाई रोक्दछ जसले खाँसीमा निम्त्याउन सक्छ।
नुनिलो पानी: नुनको पानी गार्लि गर्नाले तपाईंको घाँटीमा कफ र बलगम कम गर्न सक्दछ कि जो खोकी रिफ्लेक्सको कारण गर्दछ।
अदुवा: यसको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी प्रभावहरूको लागि परिचित, अदुवालाई खोकीलाई सजिलो बनाउनका लागि चिनिन्छ। अदुवा चिया बनाउन न्यानो पानीमा केही पातलो स्लाइसहरू थप्न प्रयास गर्नुहोस्।
धेरै जसो काउन्टर र घरेलु उपचार प्रभावकारी ढ an्गले एक उत्तेजित खाँसीसँग लड्न सक्छ तर यदि खांसी रहिरहन्छ वा बिग्रन्छ भने तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग भेट्नु पर्छ। र यो सँधै राम्रो विचार हुन्छ तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु जब कुनै पनि औषधि लिईन्छ, चाहे ती ओटीसी होस् वा प्रिस्क्रिप्शन, विशेष गरी बच्चाहरूलाई उनीहरूलाई दिनु अघि।
के तपाइँका बच्चाहरूले एडीएचडी औषधिबाट ग्रीष्मकालमा ब्रेक लिनु पर्छ?
सेलिब्रिटी प्रशिक्षक Gunnar पीटरसन बाट वजन घटाने सुझाव: एक केटा स्काउट जस्तै सोच्नुहोस्
कसरी toenail कवक छिटो बाट छुटकारा पाउन
खमीर संक्रमण को उपचार को लागी के प्रयोग गर्ने
४ दिन पछि काम गर्ने योजना बनाउनेछ
कसरी तुरुन्तै रक्तचाप तल प्राप्त गर्न
कसरी ब्लीच संग toenail कवक उपचार गर्न
omeprazole को अधिकतम खुराक के तपाइँ लिन सक्नुहुन्छ
97 एक राम्रो रक्त शर्करा को स्तर हो